Induction Handheld I-Brazing Copper kwi-Tube yentsimbi, iNtsimbi ukuya kwiPipe.
Iisilinda ze-braze zethusi, iingcingo zobhedu, kunye neetyhubhu zentsimbi ngaphantsi kwemizuzwana engama-20 kusetyenziswa inkqubo yokufudumeza ye-DW-UHF-6KW-III.
DW-UHF-6KW-III inkqubo yokufakelwa kwesandla sempepha
• Isilinda esenziwe ngobhedu kwiingcingo zobhedu.
Ukushisa: 871 ° C (1600 ° F)
ixesha: 20 umzuzwana
• Isilinda yomsila kwityhubhu yentsimbi.
ixesha: 10 ukuya kwi-11 sec
Iziphumo kunye nezigqibo:
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-alloy preforms / amakhonkco endaweni yentonga yomlilo. Oku kuvumela umsebenzisi ukuba asebenzise zozibini izandla ukubamba i-U-Braze. Ikwaphucula nomgangatho wokutsha kunye nokuphindaphinda ngokusasaza isixa esifanelekileyo se-alloy macala onke ajikeleze ibraze.
Xa ukhangela ubhedu ngentsimbi, kungcono ukunqobela ubhedu ukuthintela ukugqithisa isiqwenga sentsimbi kuba ubhedu lunobushushu.
iindidi Teknoloji tags ubhedu obhedu, Ityhubhu yentsimbi ebhulayo, iityhubhu ezigqobhozayo, Ukubamba ngesandla, Isiphatho esenziwe ngesandla esiphathwayo, handheld brazing iron iron, ukukhangela ibhondi, ukutyunjwa kwebhondi ityhubhu yethusi, ungeniso lwangaphakathi oluphathwayo Post yokukhangela
Induction I-Brazing Aluminium Tube T Udibaniso
ukufakwa okuziinkozo ngobhedu kunye neentonga zobhedu